Real Madrid oo guul raaxo leh ka soo gaartay kooxda Deportivo Alaves oo ay booqatay… +SAWIRRO – Gool FM
Dajiye January 23, 2021
(Spain) 24 Jan 2021. Real Madrid ayaa guul raaxo leh ka soo gaartay kooxda Deportivo Alaves oo ay booqatay, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-4, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka La Liga.
Qeybta hore ee dheesha ayaa lagu kala natsay 0-3 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Real Madrid.
15 daqiiqo marka ay ciyaarta mareysay Real Madrid ayaa hoggaanka u qabatay dheesha, waxaana 0-1 ka dhigay Casemiro oo caawin ka helay Toni Kroos.
Daqiiqadii 41-aad Real Madrid ayaa dhaliay gool labaad waxaana 0-2 ka dhigay xiddiga reer France ee Karim Benzema, waxaana si qurux badan goolkan kaga caawiyay saaxiibkiis Eden Hazard.
45 daqiiqo Eden Hazard ayaa niyadjabiyay xiddigaha Deportivo Alaves wuxuuna dheesha ka dhigay 0-3 ay ku hoggaamineyso kooxdiisa Real Madrid, kaddib markii uu caawinta goolkan si qurux badan uu kaga helay Toni Kroos.
Daqiiqadii 59-aad kooxda Deportivo Alaves ayaa la timid gool waxaana 1-3 ciyaarta ka dhigay xiddigooda Joselu, oo caawinta goolkan ka helay saaxiibkiis Lucas Perez.
Laakiin 70 daqiiqo marka ay ciyaarta aheyd Karim Benzema ayaa dheesha ka dhigay 1-4 ay ku hoggaamineysay Real Madrid, waxaana caawinta goolkan lahaa Luka Modric.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 1-4 ay Real Madrid kaga soo adkaatay kooxda Deportivo Alaves oo ay ku booqatay garoonka Estadio Mendizorroza, Los Blancos ayaa haatan ku jirta booska labaad ee dhanka kala sareynta horyaalka waxayna leedahay 40 dhibcood.